Ma taqaan sababta ay Dowlad Goboleed uga dhismi la'dahay Gobollada Dhexe? - iftineducation.com
Ma taqaan sababta ay Dowlad Goboleed uga dhismi la’dahay Gobollada Dhexe?
aadan21 / December 30, 2014
iftineducation.com – Gobollada Dhexe maxay Dowlad u dhisan kari la’yihiin? Degmooyinka iyo siyaasiyiinta hor boodayaa maxay guul u yaqaannaan? Dantoodu ma in ay helaan baa waxa ay doonayaan? Mise dantoodu waxay ku jirtaa in ay is-hor taagaan waxa ay kuwa kale doonayaan?
Waa mowduuca aan jecel ahay in aan halkan ku qaadaa dhigo. Si ay noogu fududaato, waxaa habboon qolyahaya is haya in mid kastaa uu is weydiiyo ujeeddadiisu waxa ay tahay. Ma adigaa wax doonaya? Mise cid wax isu rabta ayaad is-hor taageysaa?
Dhuusa Marreeb iyada oo aan waxba is-hor taagin, cadaawadna aan abuuran, ha raadsato waxa ay iyadu dooneyso. Uma qabo in ay dooneyso marti gelinta shirka – saa hore ayaa loo go’aansadaye. Waxay dooneysaa waa in ay noqoto caasimadda Dowlad Goboleedka.
Cadaado waa magaalo si wanaagsan u dhisantay intii uu burburku jiray. Waana goob la go’aansaday in shirka lagu qabto. Cadaado iyaduna waxay u baahan tahay in ay fahamto in aan marti gelinta shirka loo diiddaneyn loona diidi karin. Laakiin tuhunku uu yahay in ay dooneyso in ay adeegsato fikradda ganacsiga ee ah – Mid gado midna lacag la’aan ku qaado.
Ugu dambeyn, taladeydu waxay ku kooban tahay – yaan la is lug jiidin, yaanna la is tijaabin ee ha la is aqbalo, waxna ha la isu quuro si la isu kaashado.
Posted by: Yusuf Garaad at 7:52 PM
Ku bishaarayso guul u soo hoyatay soomaalida South frica daawo
Alshabaab oo la soo baxday weji kale oo dagaal Daawo muuqaal uu baahiyay tvga Aljazeera